CT Ralaiarison Justin
Ny famotsoran-keloka faobe no vahaolana
15/03/2012 Nisy iraka manokana tany atsimo nataonay mirahalahy, Ralaiarison Justin sy Sazalahy Tsianihy izay mpikambana amin’ny Kongresin’ny tetezamita, avy amin’ny ankolafafy Ravalomanana avy any Atsimo Andrefana nanamafisanay fa ny famotsoran-keloka faobe no mahasoa ny vahoaka Malagasy manerana ny Nosy ka andrandrain’ny politika tia tanindrazana sy ny mpandraharaha te-hampandroso ny firenena. Raha ny tsy fandriampahalemana mihatra manerana ny lafivalon’ny Nosy no asian-teny dia mila fitoniana ara-politika ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny.
Mihamahantra ny mpiara-belona ka mila fanatanterahana haingana ny tondrozotra ahafahana mahazo fanohanana ara-bola avy any ivelany, hoy ny CT Justin sy Tsianihy. Tena ilaina io fanampiana ara-bola avy any ivelany io satria raha tarafina amin’ny zava-misy any Atsimo ny resaka dia hita fa ny fanamboarana ny digy Fiherenana any Toliara II sy digy Ankiembe Toliara I dia asa vonjy tavanandro, zara raha vita no natao, noho ny tsy fisiam-bola. Ho anay ankolafy Ravalomanana, hoy ireto CT ireto, dia tsy hanaiky hilalaovan’ny mpanao politika sasany amin’ny resaka famotsoran-keloka asiana fanasivanana fa ho anay dia ny famotsoran-keloka faobe no mety hisorohana amin’ny fivakisan’ny fiarahamonina indray mandeha indray.